Inqaku lomgca Veto Inkcazo - Imbali kunye nemizekelo
Imbali yeCandelo leNgcaciso yeVeto amandla kunye noMongameli
I-veto yemigqaliselo ngumthetho ongekho mthethweni owanikeze umongameli igunya elipheleleyo lokugatya amalungiselelo athile, okanye "imigca," yebhilikhi edizwe kwiSebe lakhe laseMelika kunye nabameli beeNational Senate ngenkathi ivumela ezinye iindawo zibe umthetho kunye nesayinwe. Amandla omnxeba we-veto aya kuvumela umongameli ukuba abulale ingxenye yebhilidi ngaphandle kokuba afune i-piece of legislation.
Abalawuli abaninzi banamandla, kwaye umongameli we-United States wenza njalo, ngaphambi kokuba iNkundla ePhakamileyo yase-United States igwebe umgaqo-veto ongahambisani nomgaqo-siseko.
Abagxeki bempahla ye-veto bathi linike igunya likaMongameli ngamandla kwaye bavumela amagunya olawulo elilawulayo ukuba aphululele kwimisebenzi kunye neembopheleleko zesebe lezomthetho. "Esi senzo sinika umongameli amandla angatshintshiyo ukuba atshintshe itekisi yemimiselo ebekwe ngokusemthethweni," INkundla ePhakamileyo yaseYurophu uJohn Paul Stevens wabhala ngo-1998. Ngokukodwa, inkundla ithole ukuba uMthetho woVeto we-Line Item ka-1996 waphula uMthetho woMgaqo -siseko , evumela umongameli ukuba enze uphawu okanye veto ibhilikhi ngokupheleleyo. I-Clause yeNtetho ithi, ngokwenxalenye, ukuba ibhaso-mali inikwe "kumongameli wase-United States; ukuba uyavuma ukuba uya kuyityinisa, kodwa ukuba akayi kubuyisela."
Imbali yeNqaku leNqakrazo yeVeto
AbaMongameli be-US baye bacela iCongress ithuba lokusebenzisa i-veto ngamandla.
I-veto yowumgca yenziwa kuqala phambi kweNgqungquthela ngo-1876, ngethuba likaMongameli u-Ulysses S. Grant . Emva kwezicelo eziphindaphindiweyo, iCongress yadlulisa uMthetho woVeto we-1996.
Yile ndlela ayenziwa ngayo umthetho ngaphambi kokuba ihlaselwe yinkantolo ephakamileyo:
I-Congress yadlulisela umgaqo wecandelo obandakanya irhafu okanye ulwabiwo-mali.
Umongameli "waqhawula" izinto ezichasene naye waza wasayina ibhilikhi eguquliwe.
UMongameli wathumela izinto ezigqityiweyo kwiCongress, eyayineentsuku ezingama-30 ukungavumelani nomxholo we-veto. Oku kufuna ukuba uninzi lwamavoti aluninzi kumagumbi amabini.
Ukuba zombini i-Senate neNdlu ingavunyelwanga, iCongress yathumela "isimangalo sokungavumi" kumbuyisi. Ngaphandle koko, i-vetoes yento yomgca yenziwa njengomthetho. Ngaphambi kwesenzo, iCongress yafuneka ivume ukuba nayiphi na inxaxheba yomongameli yokucima imali; ukungabikho kwamabandla e-congressional, umthetho wawusenyanzele njengoko udluliselwe yiCongress.
Nangona kunjalo, uMongameli unako ukuvota i-bill ye-disapproval. Ukugqithisa le veto, iCongress yayiya kufuna isininzi sesibini.
ICongress iye yanika uMongameli igunya ngokusemthethweni ukuba angayisebenzisi imali. Isihloko X soMthetho wokuLawula umda ka-1974 wanika umongameli igunya lokubambezela ukuchitha imali yezimali kunye nokucima imali, okanye oko kwakuthiwa "ukukhutshwa kwamagunya." Nangona kunjalo, ukuhlawula imali, umongameli wayedinga ukuvumelana ngokuhambelanayo kwiintsuku ezingama-45. Nangona kunjalo, iCongress ayimfuneko ukuba ivote ezi ziphakamiso kwaye ihoxise izicelo ezininzi zikaMongameli zokucima imali.
Umthetho weNqakrazo yeVeto ye-1996 yatshintshile ukuba igunya lokumisa. Umthetho weNqakrazo ye-Veto Act ibeka umthwalo kwiCongress ukuba ingavumi umgca wokuphuma kwipeni lomongameli. Ukungaphumeleli kokuthatha isenzo kuthetha ukuba i-veto kaMongameli iqale ukusebenza. Ngaphantsi kwe-1996, iCongress yayineentsuku ezingama-30 zokugqitha intetho yomongameli. Naluphina isisombululo sokwenqatshwa kwe-congressional, nangona kunjalo, yayingaphantsi kwe-veto kamongameli. Ngaloo ndlela iCongress yayidinga ubuninzi babini kwisithathu kwikamelo ngalinye ukuba liphumelele ukuxoshwa kukaMongameli.
Isenzo sasiyimpikiswano: sanike amandla amatsha kumongameli, sichaphazele ibhalansi phakathi kwamasebe omthetho kunye nolawulo, kwaye yatshintsha inkqubo yohlahlo lwabiwo-mali.
Imbali ye-Line Item Veto Act ka-1996
URiphabliki wase-US uSen uBob Dole waseKansas uqalise umgaqo wokuqala kunye nabavakalisi abangama-29.
Kwakukho amanyathelo athile ahambelana neNdlu. Kwakukho imiqathango kumandla omongameli, nangona kunjalo. Ngokutsho kweNgxelo yenkomfa yenkomfa ye-Congressional Service, ibhali-mali:
Ulungelelanisa i-Congressional Budget kunye noMthetho wokuLawula umda we-1974 ukuba ugunyaze uMongameli ukuba aphelise yonke imali enamaphepha ebhajethi yokuqonda, nayiphi na into entsha yokusetyenziswa ngokuthe ngqo, okanye nayiphina inzuzo yerhafu engagqityiweyo kumthetho, ukuba uMongameli: (1) ugqibe ukuba ukuchithwa okunjalo kuya kunciphisa ulwabiwo-mali lweSithili kwaye aluyi kuphazamisa imisebenzi ebalulekileyo kaRhulumente okanye ukulimaza umdla wesizwe; kwaye (2) ikwazisa iCongress nayiphi na ukukhanselwa kwiintsuku ezintlanu zekhalenda emva kokumiselwa komthetho onika loo mali, into okanye inzuzo. Kudinga uMongameli, ekuchazeni ukukhanselwa, ukuqwalasela iimbali zomthetho kunye nolwazi oluchazwe kumthetho.
Ngo-Matshi 17,1996, i-Senate yavota 69-31 ukugqithisa inguqu yokugqibela yebhili. Le ndlu yenza njalo ngoMatshi 28, 1996, ngevoti yezwi. Ngo-Ephreli 9, 1996, uMongameli uBill Clinton wasayina lo mthetho-mthetho. UClinton wachaza kamva iNkundla ePhathelene neNkundla ephakamileyo, esithi "ukutshatyalaliswa kwabo bonke abantu baseMelika." Inqanda umongameli wesixhobo esibalulekileyo ekupheliseni inkunkuma kwi-budget yemali kunye nokuvuselela ingxoxo yomphakathi malunga nendlela yokusebenzisa kakuhle mali kawonkewonke. "
Imingeni yezomthetho ukuya kwiNqakatho ye-Veto Act ka-1996
Ngomhla emva koMthetho we-Line Item Veto Act ka-1996 udlulile, iqela lama-senators ase-US inselele inkokhelo kwiNkundla yeSithili sase-US yeSithili sase-Columbia.
IJaji leSithili sase-US uHarry Jackson, owamiselwa ebhentshini nguMongameli weRiphablikhi uRonald Reagan , wamemezela umthetho ongavumelani nomgaqo-nkqubo ngo-Ephreli 10, 1997. Kodwa iNkundla ePhakamileyo yase-United States, yabulawula ukuba abaphathi benkundla abazange bajame ukumangalela, ukugxotha umngeni wabo nokubuyiselwa umgca wento yecala kumongameli.
UClinton wasebenzisa i-veto igunya eli-82 igunya. Emva koko umthetho wawuneengxaki kumacala amabini ahlukeneyo afakwe kwiNkundla yeSithili sase-US kwiSithili sase-Columbia. Iqela labameli abavela kwiNdlu kunye neNkundla yeeNkundla ligcine ichasene nomthetho. Ijaji yesithili sase-US uThomas Hogan, naye uReagan umqeshwa, wachaza umthetho ongavumelani nomthetho ngo-1998. Isigwebo sakhe sagunyazwe yiNkundla ePhakamileyo.
INkundla inqume ukuba umthetho uphule uMthetho woMxholo (Isiqendu 1, iSahluko 7, amaCandelo 2 no-3) eMgaqo-siseko wase-US ngenxa yokuba wanika umongameli igunya lokubumbisa ngokungahambisani okanye ukuphelisa inxalenye yemimiselo eyadluliselwa yiCongress. INkundla inqume ukuba uMthetho weVeto we-Veto Act ka-1996 waphula inkqubo eyenziwa nguMgaqo-siseko wase-US ukuba iindleko ezivela kwiNgqungquthela zibe ngumthetho wesigqeba.
Umthetho weMithetho kaMthetho-Umxholo we-Veto kunye no-Rescissions Act ka-2011 uvumela umongameli ukuba atyunde izinto ezikhethekileyo zokunqunyulwa kumthetho. Kodwa kuya kwiCongress ukuvumelana phantsi kwalo mthetho. Ukuba iCongress ingenzi umthetho wokucinywa okucetywayo zingadlulanga iintsuku ezingama-45, umongameli kufuneka enze imali ifumaneke, ngokwe-Congressional Research Service.
UAbraham Lincoln kunye neKhowudi yaseGettysburg
Biography yaseGeorge Washington
UBill Clinton - UMongameli wesine-wesibini we-United States
UGeorge HW Bush uMongameli oMashumi-wokuqala we-United States
UJohn Quincy Adams: Mongameli 6 we-United States
UWilliam Henry Harrison - uMongameli we-Nine we-United States
Ukhetho lwe-1812: DeWitt Clinton Kungekudala engabonakaliyo uJames Madison
Amaqela ezoPolitiko aphumayo kuma-1800
Umehluko phakathi kwemixube yeHeterogeneous & Homogeneous
Ndikulungele Ukutya: Iimifanekiso ze-Zombie ze-Comic
IJografi yeDetroit iyancipha
Iintlobo eziThathu eziPhambili zokuHlola abaNxibelelwano
Umxhasi ukhangele eGeorgia
Indlela yokuKhuthazwa kweMpawu zeMpawu zeMpawu zeMpawu zeMpawu
Ziziphi iZikolo zeBhizinisi?
Yenza iRuby "IgamaLobugqwetha: ukungachazwanga kwendawo yendawo" Iphutha
Inkqubela phambili iyancipha ekunciphiseni, ukubuyisela kwakhona nokusebenzisa ngokutsha i-Waste Food Fast
I-PGA ye-RBC ye-Canadian Open Open
Iindlela zeTidal Power Plant Plant
Iyintoni i-Pastoralism: Ukuqonda indlela yayo kwiMbali yakudala
I-National Afro-American League: Umbutho woLuntu woLuntu loLuntu
Oko Okuthethwa YiBhayibhile Ngokuthobeka